Powdered organic fatịlaịza mmepụta akara - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
A na-ejikarị fatịlaịza fatịlaịza eme ka ala dị mma ma na-enye nri maka uto ihe ọkụkụ. Ha nwekwara ike ire ngwa ngwa mgbe ha banyere n'ime ala, na-ahapụ nri ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na a na-etinye fatịlaịza na-edozi ahụ na-edozi ahụ na nwayọ nwayọ, a na-echekwa fatịlaịza fatịlaịza ogologo karịa fatịlaịza organic. Ojiji fatịlaịza organic emeela ka mbibi nke osisi ahụ belata na gburugburu ala.
Fatịlaịza Organic na-enye ala ihe ndị dị n’ime ala, si otú a na-enye ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ dị ha mkpa iji nyere aka wulite usoro ala dị mma, kama ibibi ha. Fatịlaịza Organic nwere nnukwu ohere azụmaahịa. Site na mgbochi na mmachi eji nwayọ eji eme ihe n'ọtụtụ mba na ngalaba ndị dị mkpa, mmepụta fatịlaịza ga-abụ nnukwu ohere azụmaahịa.
Enwere ike ịgbanye ihe ọ bụla e kere eke dị n’ime ala. N'ezie, a na-akụda ma na-enyocha compost ka ọ ghọọ ezigbo fatịlaịza organic fatịlaịza.
4. Ihe mkpofu ezinaụlọ: ahihia kichin.
Usoro a chọrọ iji mepụta fatịlaịza na-ekpo ọkụ dị ka neem achịcha ntụ, koko peat ntụ ntụ, oyster shell powder, beef dung dung powder, wdg gunyere ịkọwapụta ngwa ọrụ zuru oke, na-akụpịa compost na-esi na ya apụta, wee na-enyocha ma na-etinye ha.
Powdered organic fatịlaịza mmepụta akara nwere mfe technology, obere na-eri nke ego ngwá, na mfe ọrụ.
Anyị na-enye ọkachamara oru ọrụ nkwado, atụmatụ dị ka ndị ahịa mkpa, imewe Eserese, na-na saịtị na-ewu aro, wdg
Usoro ihe eji emeputa nri fatịlaịza: compost - ndinuak - sieve - nkwakọ ngwaahịa.
Organic ngwaọrụ bụ mgbe nile rụrụ site dumper. E nwere ọtụtụ ọnụọgụ nke na-emetụta compost, ya bụ nha urughuru, carbon-nitrogen ruru, ọdịnaya mmiri, ọdịnaya oxygen na ọnọdụ okpomọkụ. Ekwesiri ilebara anya na:
1. Azọpịa ihe n’ime obere ihe;
2. Nchịkọta carbon-nitrogen nke 25-30: 1 bụ ọnọdụ kachasị mma maka ịmị mkpụrụ dị mma. Moredị ụdị nke ihe ndị na-abata, ohere ka ukwuu nke ire ere dị irè bụ ịnọgide na-enwe akara C: N kwesịrị ekwesị;
3. Ezigbo mmiri mmiri nke compost ngwaọrụ bụ n'ozuzu banyere 50% na 60%, na Ph na-achịkwa na 5.0-8.5;
4. Ihe ntụgharị ahụ ga-ahapụ okpomoku ikpo ahihia. Mgbe ihe ahụ mebiri n'ụzọ dị irè, ọnọdụ okpomọkụ na-agbada ntakịrị na usoro ntụgharị, wee laghachi na ọkwa mbụ n'ime awa abụọ ma ọ bụ atọ. Nke a bụ otu n'ime uru dị ike nke ọkpọka.
A na-eji grinder warara gri egweri compost. Site na ngwepịa ma ọ bụ egweri, enwere ike ịgbari ihe na compost iji gbochie nsogbu na nkwakọ ngwaahịa ma metụta ogo nke fatịlaịza organic.
Igwe na-atụgharị igwe na-ewepụ ọ bụghị naanị na-ewepụ adịghị ọcha, kamakwa na-ahọrọ ngwaahịa ndị na-erughị eru, ma na-ebufe compost na igwe myọ site na eriri ebu. Usoro a dabara adaba igwe eji eji sieve sie ya na oghere sieve. Ntughari di nkpa maka nchekwa, ire na itinye compost. Sieving na-eme ka usoro nke compost dịkwuo mma, na-eme ka ịdị mma nke compost dịkwuo mma, ma na-aba uru na nkwakọ ngwaahịa na njem.
4. Nkwakọ ngwaahịa
A ga-ebuga fatịlaịza ahụ na igwe nkwakọ ngwaahịa iji gbanye fatịlaịza fatịlaịza nke nwere ike ree ya site na ntanye, na-abụkarị kilogram 25 kwa akpa ma ọ bụ 50 n'arọ kwa akpa dị ka otu ngwugwu ngwugwu.